Allaattiin Iluu Abbaa Booraatti argamte maaliif yaaddoo uumte? - BBC News Afaan Oromoo
Allaattiin Iluu Abbaa Booraatti argamte maaliif yaaddoo uumte?
Image copyright Wandimu Dabala Amantee
Goodayyaa suuraa Allaattii Waayit Ispoorki Lixa Oromiyaa Iluu Abbaa Booraa keessatti argame jedhame.
Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Sal'ee Noonnoo jedhamutti gaafa 4/3/2012 allaattiin mallattoo addaa miilla ishee irraa qabdu tokko argamte.
Guyyaa keessaa gara sa'a 7:00 yommuu tahu dargaggoon Natsannet Geetahun jedhamu hojii isaa guyyuf aanaa Sal'ee Noonnoo ganda Kombolchaa bakka laga Siir jedhamu keessa osoo deemaa jiruu allaattii tokko arge.
Allaattiin kunis gosoota allaattii duraan naannichatti baay'inaan beeku irraa adda itti taate. Kanaaf xiyyeeffannoon yoo ilaalu miilla lamaan irratti barreeffama tokko arga.
Kanumaan allaattii kana qabuun gara waajjira poolisii geessuuf murteesse. Odeeffannoon kun torban kana keessa miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa tureera.
Icciitiin barreeffama allaattii kana irra jiruu hoo maali? jechuun kanneen gaafatanis jiru. Basaasaaf kan ergamte tahuu dandeessi jechuun namootni yaaddoo qabanis akka jiran namoota naannichaa irraa odeeffanneerra.
Image copyright Wandimu Dabala Amante
Qajeelcha Poolisii aanichaatti abbaa adeemsa Dagaagina Naamusaa kan tahan Saajin Balaachoo irraa akka odeeffannetti dargaggoon allaattii kana qabe guyyuma sana gara galgalaa sa'a 11 keessa gara waajjira poolisii aanichatti geesse.
Saajin Balaachoon akka jedhanitti allaattiin argamte kun miilla ishee mirgaa irratti waan akka amartii hidhamee jira.
Barreeffama ''T ARAB 4542'' jedhus qaba jedhan Saajin Balaachoon. Miilla bitaa irratti ammoo ''Poolaand'' jedhamee barreeffamee akka jiru BBCtti himan.
Allaattiin kun qabamtee gara waajjira keenyaa erga dhuftee namootni hedduun bahanii ilaalaa turan jedhan. Waan akka kanaa kanaan dura naannoo keenyatti argamee waan hin beekneef uummatnis maal tahuu danda'a jechuun gaafataa turan jedhan.
Seenaa bineensota to'annaa namootaa jala turanii
Allaattiin kun laga Siir jedhamu keessatti kan argamte yoo tahu jireenyi gosoota allaattii kanaas baay'inaan bishaan irradha jedhama.
Waajjirri poolisii aanaa Sal'ee Noonnoo odeeffannoo irratti barreeffamee jiru erga galmeessee waajjiraalee mootummaa garaagaraatti gabaasera.
''Ogeessota horii, ogeessota misoomaas dabalannee nyaata garaagaraa kan akka buddeenaa, daabboo, biskutiis kenninaanif nu harkaa fudhattee nyaachuu didde.
Bishaanis kennineef, akkasuma homaa nyaachuu didde. Gaafa guyyaa lammaffaaf akkasumatti osoo homaa hin nyaatiin waan turteef nu harkatti duute,'' Saajin Balaachoo.
Saajin Balaachoon akka jedhanitti allaattiin kun erga duutees akka hin gatnee fi ammallee ol kaa'anii akka jiran BBCtti himan.
Yaaddoo odeeffannoo funaanuuf ykn basaasaaf jechuun uummatni kaasu ilaalchisee meeshaan waa dubisuu danda'u kan akka GPS irra hin jiru jedhan Saajin Balaachoon.
Allaattiin kun eessaa dhufte?
Abbaa Taayitaa Eegumsa Bineensaa Bosonaa Federaalaatti ogeessa kan tahan Obbo Addisuu Asaffaa gosootni allaattii akka kanaa baay'inaan biyyoota Awurooppaa keessa jiraatu jedhanii waggaa keessatti ji'oota muraasaaf bakkaa bakkatti godaanuu danda'u jedhan.
Allaattiin Iluu Abbaa Booratti argamtes ''Waayit Ispoorki'' [White Spork] jedhamuun akka beekamu himan. Baay'inaan Bishaan irras jiraata jedhan.
Dhaabbileen allaattii irratti qubeelaa kaa'an akka jiran himanii eessa akka jiranii fi eessa akka gahan, waggaattis hammam socho'uu danda'u kan jedhu hordofuu danda'u jedhan.
GPS'n kan irratti hidhameeru yoo tahe eessa akka jiran hunda isaanii iyyuu to'achuu danda'u jedhanii yoo qubeelaa ykn mallattoo qofatu irra jira yoo tahe ammoo gabaasa argataniin hordofuu danda'u jedhan Obbo Addisuun.
Jijjirama qilleensaa waliin wal qabatees qilleensa akkamii keessa jiraachuuf godaanu kan jedhus qorannoodhaan adda baasuuf jecha biyyootni itti fayyadamuu danda'u jedhan.
Barattoonni Oromoo Yuunivarsitii Waldiyaa hiriira ba'uun mormii dhageessisan
Allaattii Godina Iluu Abbaa Booraatti argamte kana ilaalchisees dhaabbata biyya Poolaandi qubeelaa allattiitti hidhu tokkoof ergaa karaa ''e-mail'' akka barreessan BBCtti himaniiru.
Hanga ammaatti dhaabbaticha irraa deebii akka hin arganne kan himan Obbo Addisuu Asaffaa yaaddoo odeeffannoo funaanuuf ykn basaasaaf tahuu danda'a jedhu ilaalchisees ''bara guddina teeknoloojii keessa waan jirruuf hanga qorannoodhaan adda hin baasnetti shakkuun sirriidha'' jedhan.
GPS'n allaattii kana irratti hidhame akka hin jirres poolisii aanaa Sal'ee irraa odeeffannnerra.
Haa tahu malee godaansa allaattii wagga waggaan haala qilleensaa irratti hundaa'uun raawwatu tahuu danda'as jedhan.
Dhaabbilee Poolaandi Allaattii irratti qorannoo gaggeessaniif ergaa barreesineen deebii isaanii ni eegna kan jedhan Obbo Addisuun garuu waan mudachuu maludha jedhan.
3 Onkololeessa 2017
"Dhimmi Maastar pilaani ammatti ajandaa keenya miti"
'Ijoolluma dareetti waliin barannutu Maashoo gareedhaan ajjeesse'
Naannoo ta'uu Sidaamaa booda hireen Godina Gedewoo maal ta'a?
Wada'n Raashiyaa waggaa afuriif dorgommii isportiirraa dhorke
Ministirri Fiinlaand ganna 34, MM ishee umurii xiqqoo addunyaa ta'uuf
'Siitiin kilaboota ciccimoo waliin dorgumuuf of fooyyessuu qaba'
MM aangoof jecha gudeedamu intalasaa seeratti dhiyaachu dhokse
'Simbirrootni qaamaan xiqqaachaa, baalleen guddachaa dhufan'
Dubartoota Keeniyaa qoccollaa saalaa qolachuuf mala haaraa eegalan